Fivondronamben'ny Federasiona Ranomasimbe Indiana - ss 2t l0513 tal
Fivondronamben'ny Federasiona Ranomasimbe Indiana Fivondronamben'ny Federasiona Ranomasimbe Indiana
Lesona 05 : Mitadiava an'i Jehovah dia ho velona ianareo (Amôsa)
27 Apr. - 3 Mai 2013
Nantsoina ho Mpaminany
Talata 30 Apr.
Any Tekoa, any Joda, no fonenan’i Amôsa, nefa nirahin’ Andriamanitra haminany tany Isiraely izy. Lasa nankany amin’ny fanjakana any avaratra izy ary nitory tamin-kery lehibe tokoa hany ka “tsy zakan’ny tany ny teniny rehetra” (Amôsa 7:10). Azo antoka fa maro ny Isiraelita no nijery an’i Amôsa tamim-piahiahiana sy nandà azy tsy ho irak’Andriamanitra. Na dia teo aza izany fandavana izany dia nanatanteraka tamim-pahatokiana ny asa fanompoana amin’ny maha-mpaminany azy izy.
Vakio ny Amôsa 7:10–17. Inona no môdely mahazatra hita eto? Inona koa no ohatra hafa hitanao ao amin’ny Baiboly mitovy amin’izay mitranga eto? Inona no tokony hianarantsika avy amin’ireo ohatra rehetra ireo?
Anisan’ireo izay tsy tia ny fitoriana nataon’i Amôsa i Amazia, mpisorona tao Betela, izay niampanga an’i Amôsa ho nikomy tamin’ny mpanjakan’ny Isiraely. I Betela no anankiray tamin’ireo fitoerana masin’ny mpanjaka, izay tena foiben’ny fanompoan-tsampy. Nambaran’i Amôsa mialoha am-pahibemaso fa raha tsy mibebaka ny Isiraely, dia ho matin’ny sabatra ny mpanjakany ary ny olona ho lasan-ko babo. Nibaiko an’i Amôsa hiverina any amin’ny tanin’ny Joda i Amazia, fa ny vahoaka any no ho tia kokoa ny hafatra famelezana ny Isiraely entiny.
Nolazain’i Amôsa marimarina tao amin’ny valin-teny nomeny ilay mpisorona fa avy tamin’ Andriamanitra ny antsony ara-paminaniana. Nohizingizininy fa tsy mpaminany matihanina izay mety hokaramaina hanao asa izy. Nasian’i Amôsa elanelana nanasaraka azy sy ireo mpaminany matihanina izay naminany mba hahazoana tombon-tsoa.
Ny fanambarana ny fahamarinana dia tsy miantoka velively ny fanekena izany, satria mety tsy azoazon’ny olona ny fahamarinana indraindray ary mety hiteraka fanoherana goavana izany – raha manelingelina ireo izay eo amin’ny fitondrana. Nanery an’i Amôsa hitory am-pahibemaso sy tamin-kahasahiana nanameloka ny fahotan’ny mpanjaka sy ireo andriana tao amin’ny fanjakana tany avaratra ny antson’ Andriamanitra, hany ka nampangaina ho mpamadika izy.
Inona no fihetsika asehontsika rehefa ilazana isika fa ny asa ataontsika sy/na ny fomba fiainantsika dia feno fahotana ka hitondra famaizana ho antsika? Inona no ambaran’ny valin-tenintsika momba antsika ary - angamba - momba ny ilantsika fiovam-po sy fiovan-toetra?
ioucmg.adventisthost.mg dia tranokala ofisialin'ny Fivondronamben'ny Fiangonana Advantista Mitandrina ny Andro Fahafito Ranomasimbe Indiana
Copyright © 2019 Fivondronamben'ny Federasiona Ranomasimbe Indiana. All rights reserved.
BP700 SOAMANANDRARINY , 101 ANTANANARIVO, ANTANANARIVO Madagascar